नेपाल आज | कोभिड-19 नियन्त्रणबारे चीनको दावीहरु किन गलत छन ?
शनिबार, १७ जेठ २०७७
कोभिड-19 नियन्त्रणबारे चीनको दावीहरु किन गलत छन ?
बिहिबार, २७ चैत २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
एजेन्सी – चीनले हाल कोभिड–१९ सम्बन्धी कुनै नयाँ घटनाहरु बाहिर ल्याउन चाहेको छैन । तर बीबीसीका रोबिन ब्रान्टले लेखे जस्तै यी तथ्यांकहरूबारे भरोसा गर्न सकिदैनन ।
चीनका अधिकारीहरुले हरेक दिन विहान ३ बजे संसारलाई कोभिड–१९ को अकडालाई देखाउन एकै ठाउमा नियन्त्र गरी राख्दै आएको छ । चीनले ७ अप्रिल सम्म ८१ हजार ७ ४० संक्रमित र ३ हजार ३ सय ३१ को मृत्यु भएको घटना बाहिर ल्याएको छ ।
भाईरस फैलिरहेको देशले चीनलाई संकट समाधान गरेको देखेर प्रशंसा समेत गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडहोम घेब्यियसले चीन तिब्र गतिमा भाइसलाई पतालगाई पारदर्शिता गरेको प्रति धन्यवादद समेत दियो ।
तर डब्ल्यूएचओका ती न्यानो शब्दहरूको बाबजुद पनि, आधिकारिकहरु प्रस्तुत गरिरहेको तथ्यांक प्रति शंका रहेको छ ।
गत हप्ता ब्रिटिश सरकारका वरिष्ठ मन्त्री माइकल गोवेले बीबीसी संग कुरा गर्दै भने कि चीनबाट प्रतुत भईरहेको तथ्यांक स्पष्ट छैन यो तथ्यांक माथि शंका गर्न सकिन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि गत हप्ता भनेका थिए कि चीनमा संक्रमन र मृत्युको सख्या केही कम देखिन्छ । केहि समयको लागि अमेरिकी सांसदहरूले चीनमा कोभिड –१९ प्रकोपको संख्यामा कमी भएको आरोप लगाए ।
विश्वमा कोरोनाको घटनाहरु बढदै गर्दा अमेरिकाले चिनियाँ मुद्दाहरू र मृत्युको घटनाहरूलाई टाढा लगिदै गईरहेको छ ।
तर चीन कोरोना संक्रमण र मृत्युको तथ्यांक सार्बजानिक गर्नु प्रति पुर्ण इमान्दार देखिएको छैन ।
यो अविश्वास आंशिक रूपमा इतिहास संग जोडदै जाने छ । आंशिक रूपमा स्पष्टताको अभाले जुन अविश्वासमा अविश्वास जन्म दिदै आईरहेको छ ।
गोप्य तथ्यांकको इतिहासलाई चीनको प्रतिष्ठामा खराव असर पर्न सक्छ । उसलाई विश्वलाई विश्वास दिलाउन अधिकारी तथ्यांक प्रस्तुत गनुपर्थियो । चीन आफनो अर्थ व्यवस्थालाई प्रगतिमा ल्यानएर देश र सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टीको लागि साचो बनाउन चाहन्छ ।
धेरैजसो देशहरूको विपरीत, चीनको त्रैमासिक जीडीपी आंकडा लामो समयदेखि यसको वास्तविक आर्थिक प्रदर्शनको सटीक प्रतिबिम्ब भन्दा एक गाइडको रूपमा बढी मानिन्छ ।
यो महामारी भन्दा पहिले, सरकारले २०२० मा करीव ६ प्रतिशत वृद्धिको लागि लक्ष्य बनाएको थियो । पहिले देखि पलानिङ्ग गरेर पूर्वानुमान गर्न भने त्यो लगभग सधैं हासिल हुन्छ नै ।
तर चीन बाहिर केहि अर्थशास्त्रीहरु छन् जसले चीनको अर्थ व्यवस्थालाई अध्यनन गर्दै आईरहेको छ । उनीहरुले अनुसार कुनै तुलनात्मक अर्थव्यवस्था सँग संख्या छैन जुन यो संदिग्ध रूपमा लगातार स्तरमा बृद्धी हुन्छ ।
कहिलेकाँही कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्वानुमानमान निर्भर गर्दछ । यद्यपि उनीहरूलाई वास्तवमै भेटिएन भने पनि उल्टो, पार्टीको अभिप्राय पूरा नगरेको खण्डमा वास्तविकता लुकाउँछ ।
केही प्रान्तीय स्तरका अधिकारीहरुलाई नक्कली जीडीपी नम्बर फाइल गर्न सार्वजनिक सजाय दिएको थियो ।
केही अनुमानले उक्त संख्याको आधामा चीनको वास्तविक आर्थिक वृद्धि रहेको बतायो। विगतमा, प्रान्तीय बिजुली उत्पादन गर्ने तथ्या गकष्लन्कहरू प्रयोग गर्ने केही स्वतन्त्र विश्लेषणले आधिकारिक तथ्यांकहरूको तुलनामा कम जीडीपी भएको थियो ।
यदि चीनले जीडीपी जस्तो महत्वपूर्ण चीजको बारे अस्पष्ट छ । भन्ने लगातार आरोपहरूको सामना गर्न सक्छ । तर कोभिड– १९ को –सन्र्दभमा इमान्दार देखिएनन ।
कोरोना भाइरसबाट विश्वभर एकै दिन ७७ हजारभन्दा बढी डिस्चार्ज, कति पुगे संक्रमित ?
पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण देशका बिभिन्न स्थानमा वर्षा
रुकुम घटनामा मृत्यु भएका ५ जनाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयो, केहो बास्तविकता ?
मदिरा पार्टी गर्न अपार्टमेन्टमा जबर्जस्ति घुसेका थिए रवि लामिछाने
बुधबार, ३१ बैशाख २०७७
बामदेबको बलमिच्याइँमा परेका सुबासको बिरह (भिडियोसहित)
सोमबार, २२ बैशाख २०७७
'लिपुलेकमा भारतले बाटो शिलान्यास गर्दा परराष्ट्रमन्त्री ओली! उद्घाटन गर्दा प्रधानमन्त्री'
आइतबार, २८ बैशाख २०७७
हात्तीवनमा प्रचण्ड पक्षकाे गाेप्य भेला, काे-काे बने सहभागी ? भए यस्ता निर्णय
सकियो नेकपा सचिवालय बैठक, एमसीसी सम्झौताबारे गर्यो यस्तो निर्णय
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तोडे विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको सम्बन्ध
'अब जनता बोल्छन्' कार्यक्रम आउदै